Ihe ịhụ na Huesca | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Huesca
Dị ka ọ dị na Teruel, ógbè Aragonese nke Huesca bụ otu n'ime nnukwu ebe a na-amaghị na Spain. Ọ dị n'ebe ugwu nke mba ahụ na France. Banye n'ókèala ya pụtara ịchọpụta ọtụtụ ebe nkiri, ọdịbendị, okike na gastronomic. Na-eje ije site na ugwu na ndagwurugwu, gaa na obodo ochie ma rie nke ọma. Ọ na-amasị gị echiche? Mgbe ahụ, echefula ihe ị ga-ahụ na Huesca, n'okpuru.
1 Ogige Ugwu Ordesa na Monte Perdido
3 Ugwu Loarre
4 Formigal na Panticosa ski ezumike
Ogige Ugwu Ordesa na Monte Perdido
E kwupụtara dị ka nke a na 1918, Ogige Ntụrụndụ Ordesa y Monte Perdido bụ nke abụọ kacha ochie na Spain, ndị mmadụ 600.000 na-aga kwa afọ. iji nwee ọ enjoyụ ma ju gị anya site na ọdịdị nke ebe a pụrụ iche.
E kwupụtara ya Ebe Nleta Worldwa na 1997 yana Biosphere Reserve na Geopark. Site na hectare 15.696 ma dị na mpaghara Sobrarbe, e kere ya na mpaghara anọ: Ordesa, Añisclo, Escuaín na Pineta. N'ebe a, enwere ugwu ndị dị ka Monte Perdido (nke atọ kachasị elu na Pyrenees na mita 3.355) nke oke ọhịa nke beech, fir na pine ojii, na-ekpuchi ugwu ya. Na oge mgbụsị akwụkwọ, oke ohia na-acha uhie uhie, ụda uhie na oroma wee bụrụ otu n'ime ihe nkiri kachasị mma nke ị hụrụ na Huesca n'echefughị ​​ụdị anụmanụ ndị bi ebe a. Dịka ọmụmaatụ, marmot, ele, chamois, udele beard, ugo ọla edo ma ọ bụ anụ ọhịa.
N'aka nke ọzọ, otu ụzọ njem ama ama na Ordesa y Monte Perdido National Park bụ nsụda mmiri nke Cola de Caballo. Malite na ndagwurugwu Ordesa, enwere ọtụtụ ụzọ dị mma maka ndị na-ege ntị niile na-aga n'okporo mmiri Arazas. Routezọ ahụ gafere site na echiche ndị na-enye echiche panoramic dị ịtụnanya.
Na 48 kilomita site na obodo Huesca bụ Alquézar, obodo nke dị elu 660 mita n'otu ugwu nke dị na Pyrenees na otu n'ime obodo ndị mara mma na Spain. Alquézar jikọtara n'ụzọ zuru oke na okwute limestone nke ọdịda ya bụ Osimiri Vero.
Ọhụụ mbụ nke Alquézar si n'ebe dị anya na-eme ka anya anyị daa na Chọọchị Collegiate nke Santa María La Mayor, ụdị ebe e wusiri ike site na narị afọ nke XNUMX na nke Gothic na-egbu oge nke na-ekpu obere ugwu ma n'okpuru nke a na-etinye ọtụtụ ụlọ nkume. Ọ bụ akara nke obodo ahụ ma were ya dị ka Akụ nke Mmasị Omenala. Ihe mgbagwoju anya gbara mgbidi abuo a na-eche nche site na otutu ulo elu. A na-eme njem nlegharị anya.
Ihe oyiyi Alquézar ọzọ bụ ụka parish nke San Miguel Arcángel nke malitere na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Baroque na ụdị, ejiri mara mpụta siri ike yana ime dị mfe, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ nka bibiri n'oge Agha Obodo. Naanị isi ihe ịchụàjà ya ka echekwara. Chọọchị a dị na nsọtụ Alquézar, dị nso na mpaghara ebe enwere ọtụtụ ụlọ nri.
Ọ bụkwa ihe dị mkpa iji gaa na etiti akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ ebe ọmarịcha okporo ámá ya, ụlọ brik ya na ụlọ okwute ya, obere ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ mara mma dịka Plaza Mayor, ebe ndị obodo gbakọtara iji zute ezigbo oge.
N'ikwu banyere alquezranos, ịga na Casa Fabián Ethnological Museum ga-enye gị ohere ịmara etu ndị bi na Somontano si bi n'oge gara aga na arịa ndị eji eme kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-achọ iji ohere ịme ihe na-eme n'èzí, Alquézar na-enyekwa gị nhọrọ a na gburugburu ebe obibi nke obodo. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịga canyoning na Sierra de Guara, ụzọ nke ihe mgbakwasị ụkwụ nke osimiri Vero ma ọ bụ ọgụ na osimiri Ésera.
Ebe ọzọ a na-ahụ na Huesca bụ obodo Loarre, ama ama na Spain maka nnukwu ụlọ nke narị afọ XNUMX nke na-achịkwa ime obodo Huesca. E guzobere ya site na iwu nke Eze Sancho III iji chịkwaa ma chebe ala na-eme nri nke Hoya de Huesca n'aka ndị agha Alakụba.
N'agbanyeghị agha ndị mere ebe ahụ na oge anaghị echefu oge, Loarre Castle dị ezigbo mma. Nke ukwuu nke mere na ọ na-atụle ihe ndị kasị mma chebere Romanesque obí eze na Europe na e kwuru na a Akụ nke ọdịbendị Cultural na National Ncheta na 1906. Oké mgbidi gbara ya gburugburu na ya iri na otu elu ga-anabata gị.
Mma ya, ịpụ iche ya na ọnọdụ magburu onwe ya mere ka ọ bụrụ ntọala maka ihe nkiri dịka Alaeze Eluigwe (2005) nke onye na-eme ihe nkiri Ridley Scott mere.
Formigal na Panticosa ski ezumike
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu oge oyi, ịgba ọsọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma ịme na Huesca. Resortlọ njem ski nke Formigal na Panticosa bụ ihe ama ama ebe ọ bụ na ọ bụ ebe mbụ maka egwuregwu a na Spain na nnukwu ntụnye maka ndị na-agba ọsọ. O nwere 176 kilomita nke ugwu ndị nwere ike ịgawa ụzọ 14 na-acha akwụkwọ ndụ, 34 na-acha anụnụ anụnụ, 52 na-acha uhie uhie, ojii 42 na ụzọ 5 nwere ohere ịnweta ndagwurugwu anọ.
Ogologo kachasị dị elu bụ mita 2.250 karịa ọkwa oke osimiri na opekata mpe bụ 1.145 mana ewezuga ozi teknụzụ a niile, Formigal na Panticosa ski Resort bụ nzọrọ iji nwee ọmarịcha ihu igwe snow. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịgbakwunye ya na nleta obodo Gothic nke Sallent de Gállego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-ahụ na Huesca